Amantongomane | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Amanothi kaphayini asebenza kanjani?
Wonke umuntu uyazi ngezinzuzo zezithelo ezomisiwe namantongomane. Kodwa ngisho naphakathi kwezikhala ezinjalo kukhona imikhiqizo eyigugu kunazo zonke, ezitholakala ngokoqobo ngamavithamini namakhemikhali asebenzayo. Mayelana nenye yalezi zithelo futhi sizoxoxwa ekubuyekezeni kwethu. Sifunda okuningi ngamantongomane ephayini, izinzuzo zabo kanye nomonakalo ongase uwenze. Okuqukethwe kwekhalori kanye nokwakhiwa kwamakhemikhali. Lezi zinhlamvu zibhekwa njengomkhiqizo ophezulu-khalori - ku-100 g yokuvunwa okusha 673 kcal equkethe.
Indlela yokuhlanza ukakhukhunathi
Ngokuqhubekayo, abesimame besimanje basebenzisa imikhiqizo engavamile futhi engavamile ekuphekeni, ngisho noma ungamangali muntu etafuleni nge-ananas, ukakhukhunathi usengabhekwa njengamangalisa. Naphezu kokuthi lezi zinkukhu ezinkulu zingatholakala kalula emakethe yamahhala, akuwona wonke abathengi abakwaziyo ukukhetha nokuwavula ngokufanele, futhi kunezindlela eziningi.
Izakhiwo eziwusizo kanye nesicelo se-guarana
Abaningi ngaphezu kwesinye babhekana negama elinjalo njenge-guarana, njengengxenye yezindlela ezihlukahlukene zokulahlekelwa isisindo noma ukuvuselela isimiso sezinzwa. Ngaphandle kwegama elinjalo elimibalabala nelingaqondakali liyi-creeping shrub enhle futhi ekhangayo kakhulu. Kodwa isici esihlukanisayo sasiyinto ebonakalayo kuphela, kodwa futhi nezakhiwo eziwusizo, okuyizinto eziningi kakhulu.
Ikhukhamba: mangaki amakholori, yini ewusizo, indlela yokukhetha nokuvula, nalokho okuhlanganisiwe
I-coconut yisidlo esinamanzi ashisayo, esidumile ngezindawo zayo zokudla okunomsoco, ukunambitheka okuyingqayizivele nezinzuzo zomzimba wonke. Lesi sithelo, esikhula emanzini ashisayo olwandle ashisayo, sisetshenziswa ngokuphumelelayo emisebenzini eminingi yabantu - sizocubungula izici zalo kulesi sihloko.